दलित आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनसंग नजोडेसम्म मुक्ति सम्भव छैनः हिमाल | Kailashkhabar.com
गृहपृष्ठ › कैलाश फोकस › दलित आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनसंग नजोडेसम्म मुक्ति सम्भव छैनः हिमाल
दलित आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनसंग नजोडेसम्म मुक्ति सम्भव छैनः हिमाल
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार देशभर दलितको जनसंख्या १३.१२ प्रतिशत छ । तीमध्ये पहाडी मूलका दलित ८.१२ प्रतिशत, मधेसी मूलका दलित ४.४१ प्रतिशत र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत छन् । कुल दलित जनसंख्यामध्ये मधेसी दलितले ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
संविधानको धारा ४० (७) मा दलितका लागि उपलब्ध हुने अवसर, सेवा, सुविधामा दलित भित्रका महिलालगायत सबै दलितले समानुपातिक सुविधा पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, के त्यो सुविधा दलितहरुले पाएका छन् त ? पक्कै पनि छैनन् । जतिले पाए ति ज्यू हजुरी गर्नेले मात्रै पाएका छन् । पाएकाहरुको ध्यान समुदाय प्रति छैन । गोसाईहरुलाई नै रिझाउने तिर मात्र छ ।
त्यसैले अबको दलित आन्दोलन कस्तो हुनु पर्छ र यसको कार्यदिशा के हुन पर्छ ? भन्ने कुरा नै प्रमुख हो । जव सम्म दलित आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनसंग जोडिदैन तब सम्म राज्यले दलितलाई झन दलित बनाउने सपना बुन्ने छ ।
शासक राजनैतिक दलहरु झन् दलितलाई माथि उठ्न नदिने प्रपञ्चमा लागेको देखिन्छ । दलित आन्दोलन नभएर यसलाई वर्गीय आन्दोलन संगसंगै साँस्कृतिक आन्दोलनको बाटोबाट माथि उठाउनु पर्छ । नयाँ पुस्तालाई दलित आन्दोलन भनेर होइन कि वर्गीय आन्दोलन भनेर चिनाउनु पर्छ र युवा पुस्तालाई यही माध्यमबाट सचेत गराउनु नै पहिलो दायित्व हुन्छ ।
नेपालको पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्म, चिनको तिब्बत देखि भारतको युपी, बिहारसम्म फैलिएको हिमाल, पहाड, तराईबीच फैलिएको भु–भागमा लाखौं दलित समुदाय बसोबास गरिरहेको तथ्यांक छ । कजाउने र काम काजमा प्रयोग गर्ने उदेश्यले समुदायलाई नै दवाईएको इतिहास अहिले सम्म कायम छ ।
विभेद कहाँ छैन र ?
हिमाल, पहाड, तराई र मधेस तथा नेवारी समुदाय भित्र पनि विभेद कायमै छ । समुदायको विभाजन कसरी गरिएको छ भन्ने कुरा हामी सबै स्पष्ट छौं । जुनसुकै मुलका दलित भएपनि सबैको दुखाई, भोगाई र पीडा र उत्पीडन समान छ । तर दलित भित्रको विभेद पनि कम छैन ।
हुने खाने दलितको अवस्था एक छ भने हुदा मात्रै खाने दलितको अवस्था झन् जटिल बनिरहेको छ । त्यसैले समग्रमा यो समस्या समाधान गर्न वर्गीय दृष्टिकोणबाट मात्रै सकिन्छ । दलितले दलित भित्रै लडाई गरोस र दायाँ बाँया ध्यान केन्द्रीत नहोस भनेर दलित भित्रै लडाएर फाइदा लिने शासकहरुको चलाकी अब दलित समुदायले बझ्न जरुरी छ ।
सबैले हेक्का राख्नु पर्छ
इतिहास देखि वर्तमानको लामो समयको कालखण्डमा दलित समुदायले निकै संघर्ष गरेका छन् । बेला बेलामा भएका आन्दोलन होस् या युद्ध दलित समुदायले निर्णायक मोर्चामा भाग लगेको छ तर आन्दोलन र युद्ध सफल भए पश्चात दलित झन झन दलित बन्दै गएको र बनाइएको छ । यसमा दोष कस्को ?
तपाई हामीलाई राम्ररी थाह भएकै कुरा हो । दलित समुदायले यसरी नलडेको भए नेपालको गणतान्त्रिक संविधानमा मौलिक हककै रुपमा दलितका केहि अधिकार समेटिने थिएनन् । संविधानमा उल्यख भएका ति अधिकारहरु व्यवहारत किन कार्यान्वयन भएन ।
सवाल यहि निर छ, कसका कारणले कार्यान्वय फितलो भयो त ? जातिय छुवाछुत, कसुर सजाय ऐनको समेत दलित समुदाय जानकार नहुनु दोष कस्को ? दलितका विषयमा ओकालत गर्नेहरु किन यस विषयमा गम्भिर देखिदैनन् ?
दलित समुदाय यसकारण दोषी
संविधान आफैमा एउटा निर्जीव किताब हो । यसको कार्यान्वयन गर्न राज्यका विभिन्न अंगहरु सक्रिय छन् । तर चलायमान किन बनाउन सकिएन ? कारण एउटै हो दलित समुदाय नै सक्रिए भएन । दलित समुदायका नाममा बजेट विनियोजन नभएको पनि होइन, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई गुहारेर बजेट नल्याएको पनि होईन ।
समुदायलाई सचेत गराउने नाममा ठूला ठूला फाइभस्टार होटलका कोठामा सिमित व्यक्तिलाई जम्मा पारेर अन्तरक्रिया, गोष्ठी, सेमिनार र आवासीय छलफल त गराउछन् । दलित संघ, संस्था समुदायमा गएर प्रत्यक्ष वस्ती भित्रै गएर सचेत गराएको भए हुने थियो । तर ति संघ सस्थाहरु आफ्नो दायित्व भुलेर कमाउ धन्दामा लाग्दान यो हविगत भएको हो । कोठे राजनीति र अन्तरक्रियाले गर्दा समुदाय सचेत हुन सकेन ।
संविधान सभाको निर्वाचनबाट नयाँ संविधान बन्यो तर विडम्बना जुन आशा र भरोषाले दलित समुदायले चाहना गरेको थियो त्यसो हुन सकेन । जन आन्दोलन र जनयुद्धमामा जुन कुराका लागि बलिदान भएको थियो त्यस अनुसार हक अधिकार अझै कायम हुन सकेन ।
शासकहरुको चलाकी पूर्ण व्यवहारका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । शासकहरुको व्यवहारकै कारण आज लाखौं लाख नेपाली युवाहरु खाडीमुलुकमा पसिना र रगत बगाउन बाध्य छन् भने त्यस मध्य झन दलित समुदायका युवाहरुको बाध्यता र नीयति नै बनेको छ ।
रमाईलो र मोजमस्तीमा प्रयोग
विदेशीने युवाको तथ्यांक अनुसार लामै फेयरिस्तको सुचि छ । विदेश पुगेका युवा युवतीहरु नाच, गान र मोजमस्तीमा पनि प्रयोग गरिएको पाईएको छ । यता नेपालमा परापूर्व कालदेखि नै दलित युवतीहरुलाई नाचगान र यौन शोषणमा नै लगाएको पाइन्छ । त्यो अवस्था अहिले पनि देखिन थालेको छ ।
भन्न खोजिएको के हो भने यश आराम र मनोरञ्जनमा दलित युवती प्रयोग गरिएका छन् । मुख्य कुरा रोजगारी नहुनु नै मुख्य कारण बनेको छ । विदेशीने नेपाली युवाको संख्या अधिक हुनुले नेपालमा रोजगारीको अवस्था कस्तो छ भनेर देखाई सकेको छ । त्यसमा झन दलित समुदायका युवाको अवस्था कस्तो छ भनेर नै आँकलन गर्न सकिन्छ ।
गरिबी र शिक्षा प्रणाली
नेपालको शिक्षा प्रणाली गरिबलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराउने तर्फ उन्मुख छ । विशेष गरि गरिबीको चपेटामा दलित समुदायलाई नै पारिएको छ । जसका कारण दलित समुदाय शिक्षाबाट वञ्चित हुदै छ । गरिबमुखी शिक्षा प्रणाली छैन अनि देखाओटी र खोक्रो आडम्बरको रुपमा नयाँ संविधानमा शिक्षा निशुल्क भनेर उल्यख गरिएको छ । शासकका छोराछोरी विदेशमा पढ्छन् ।
अनि नेपालको शिक्षावारे उनीहरुको चाँसो किन दिने ? अनि आरक्षणको साङ्लोमा बेरेर केही दलितलाई समेट्ने प्रयास गरेजस्तो गरिएको छ । यस विषयमा सचेत युवाहरुले गहन अध्यन गरेर नेतृत्व पंक्तिलाई घचघच्याउन जरुरी छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यले लगानी गरेर व्यवहारिक र वैज्ञानिक शिक्षा दिनु पर्नेमा उल्टै कसरी निजिकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै तल्लीन देखिन्छ । जसको बढी मार दलित समुदायलाई नै परेको छ ।
कम्युनिस्टकै सरकारमा समस्या विकराल
देशमा अहिले आफुलाई खाटि कम्युनिष्टको हवाला दिने सरकार छ । यो सरकारमा अब जनता सुखी हुनेछन्, देश समृद्ध हुनेछ, कोही उच्च र कोही निच हुने छैन भनेर उर्दी दिएको सरकारमा नै झन विकराल समस्या देखिएका छन् । के को देश समृद्ध हुनु उल्टै कुर्सी कसरी बचाउने र भ्रष्टाचार कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो सरकारसंग दलित समुदायले के आश गर्ने ? अवस्था हेर्दा झन विकराल छ ।
दलित भनेर घर भाडामा बसेकालाई समेत छुवाछुतका नाममा निकालिदा र कुटेर निकाल्दा समेत कम्युनिष्ट सरकार मुकदर्शक बन्यो । समाजवादी राज्य व्यवस्था कायम गर्छौ भन्ने तपाईहरु कस्तो कम्युनिस्ट ? अनि तपाईहरुको यही व्यवहारले कसरी कम्युनिष्ट सरकार कामरेड ? तपाईको यो कम्युनिष्ट सरकारबाट शोषित पीडित जनता र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायले के आश गर्ने ? तपाईहरुबाट परिवर्तको आशा गर्नु र सोच्नु पनि गलत छ भन्दा नै उत्तम हुन्छ ।
अब दलित समुदायले पनि वर्गीय आन्दोलनबाट मात्रै मुक्ति सम्भव छ भन्ने कुरा वुझ्न जरुरी छ । दलितका नाममा कोठे राजनीति गर्ने र होटलमा गोष्टी गर्नेहरुलाई सवक नसिएसम्म यो समुदाय माथि उठ्ने छैन । वैचारिक, सैद्धान्तिक र राजनैतिक रुपमा सचेत र संगठित नभएसम्म दलितको मुक्ति सम्भव छैन ।
दलित कस्ले बनायो, उत्पीडनमा कस्ले पार्यो ? हामी पछाडि पारिनुमा मुख्य भुमिका कस्को छ ? भन्ने कुरालाई ध्यान नदिएर फेरी पनि आँखामा कालो पट्टी बाँधिरर्यौ भने हामीले भोग्नु पर्ने नियति यहि हो । त्यसैले समाजको गहन अध्यन गरेर परिवर्तनका पाईला अगाडि बढाउने कि ? अब दलित शब्द नै खारेज गर्नु पर्छ । जातिय भन्दा पनि वर्गीय लडाई जायज हो भन्ने कुराको हेक्का राख्नु पर्छ ।
श्याम नेपाली ‘हिमाल’ माेरङ २०७७ चैत्र ७
प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्यो, प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउन दबाब
सांसद खरिद बिक्रीको चिन्ता बढ्याेः सुवाल (भिडियाेसहित)